Aditya Arytano ama sida miinadu ugu rumowdo instagram | Abuurista khadka tooska ah
Aditya waa wiil dhalashadiisu tahay Indonesia yaa keenay indha indheynta warbaahinta tusida xoolaha. Iyo, Minecraft ciyaarta ugu caansan ugub ee waqtigeenna waxay si toos ah u saameynaysaa shaqooyinkiisa.
Abuur xayawaan nooc kasta leh, min bisadaha ilaa kalluunka iyo xayawaannada kale ee waaweyn sida shabeelka ku jira deegaankiisa ugu dabiiciga ah. Dabcan, sida haddii ay ahayd xabadaha. Taasina waa haddii aadan weli qiyaasin waxa aan ka hadlayno, sawir ayaa ka dhigaya iyaga inay arkaan waxa aan dhahayo si ka wanaagsan.
Sida uu isagu tilmaamayo, sawiradiisu waxay ka yimaadeen bangiyada muuqaalka sida Unsplash --sidaan horeyba ugu ogayn maqaal ku yaal Creativos-. Ama sidoo kale PixaBay kuwa doonaya inay ogaadaan.
1 Sameynta madadaalo marwalba way kafiican tahay
Sameynta madadaalo marwalba way kafiican tahay
In kasta oo xaqiiqda ah in Aditya uu abuuray rajo aad u weyn, haddana taasi cudurdaar uma noqon in aan la barin taageerayaashiisa sida uu u maleeyay. Waana in maqaalkiisa uu kaga hadlayo sida uu ku yimid iyo sababta uu u daabacay.
Laakiin halkaas kuma ekaan, waxay kaloo muujineysaa khiyaanadeeda inay ku sameyso sawirro, haddii ay dhacdo in qof walba dareemo inuu sameyn karo. Qaab fudud, u qaado sawirka asalka ah una tag Photoshop. On Mac waxaad u adeegsaneysaa: Cmd + J iyo Windows: Ctrl + J; si loo abuuro lakab gooni ah oo wax looga beddelo asalka asalka. Markaad haysato labada lakab, u gudub Filter> Liquify.
Shabakaddiisa ugu weyn ee lagu soo bandhigo shaqadiisa waa mid aan ka aheyn Instagram. Halkan waxaad ka arki kartaa shaqooyinkiisa oo dhan waxaadna ka hubin kartaa isbeddelkiisa inuu yahay farshaxan cusub. Waxaan u maleynayaa inay tahay Hal-abuurka la helay sanadkan waana mudan tahay in la raaco, ugu yaraan kama waayi karno aragtida qosol ahaan.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan instagram: Aditya
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Aditya Aryanto ama sida miinadu u rumowdo
Masquespacio wuxuu dib u naqshadeynayaa istuudiyaha u gaarka ah